Ny firaisankina amin'ny openSUSE? tsy misy Avy amin'ny Linux
Ny firaisankina amin'ny openSUSE? tsy misy
pandev92 | | Fisehoana / personalization, GNU / Linux, About us
Omaly alina, saika tamin'ny ora fatoriana, dia tadidiko ny fidirana novakiako volana lasa izay, izay nanazava fa mitondra tena izy Unity en openSUSE, raha izany dia, Firaisankina 2D. Rehefa avy niresaka be dia be tao amin'ny bilaogy sy forum, dia nandeha ny volana ary tsy nahazo vaovao ofisialy izahay openSUSE, momba ny fandrosoan'ny tetikasa.
Nanapa-kevitra ny hifandray tamin'ny mpamorona an'i Openuse , izay namaly ahy:
Tsy velona intsony ny seranan-tsain'ny Unity to openSUSE, ilay olona manao azy am-boalohany dia tsy liana intsony ary miaraka amin'ny openSUSE efa manolotra maro birao birao, tsy nisy ny fihetsika tsara momba ny firaisan-kina openSUSE ezaka izay nitsambikina ny hafa.
Tsy velona ny seranan-tsambo Unity, tsy liana intsony ilay olona nanao azy tamin'ny voalohany, ary manolotra tontolon'ny birao maro i Opensuse, tsy nisy fiatraikany tsara momba ny seranan-tsambo, ezaka nataon'ny hafa.
Ka veloma amin'ny fanantenana hahita Unity en openSUSE, afaka manome ny heviny ny tsirairay, fa amin'ny farany toa toa izany ihany kanônika liana amin'ny fitantanana an'ity birao ity ianao (Akorandriaka).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » Ny firaisankina amin'ny openSUSE? tsy misy
40 hevitra, avelao ny anao
Raha tia saka 4 ny Unity dia azo antoka fa tsy fahadisoan'ireo mpampiasa izany.
Ny olona rehetra dia manapa-kevitra amin'ny zavatra iray.
Saka 4 = Saika ny olona rehetra izay mampiasa Ubuntu amin'ny dikan-teniny miaraka amin'ny Unity? : O XD
Eny, aleon'ny ankamaroan'ny Gnome Shell na tontolo hafa, ohatra tsara ianao satria mampiasa Kubuntu.
Nampiasa Kubuntu aho talohan'ny nisian'ny Unity, ka tsy afaka milaza aminao aho raha ohatra tsara na tsia xD
Ny firaisankina dia manana ny zavatra tsara, ny tena mahaliana ahy dia ny Lensa, misy zavatra mitovy amin'ny KDE ve?
Tsia, farafaharatsiny tsy izay fantatro
MetalByte dia hoy izy:
Mazava fa hitranga izany. openSUSE dia distro iray an'ny vondrom-piarahamonina, maninona no manohana tontolo iray tsy izy? Izay ho hitan'ireo izay maniry ny GNOME ary te-hanavotra ny traikefa nahafaly an'i Shell dia tahiry fitandremana miaraka amin'ny Kanelina.
Mamaly an'i MetalByte
Marina indrindra. mihevitra aho fa Ubuntu Tokony hatsahatro ny fametahana patch be loatra, amin'izay Unity azo ampiasaina amin'ny disto hafa, toa Debian ohatra. Io no kely indrindra azon'izy ireo natao.
Manaiky tanteraka, manohana zavatra izay tsy anohanan'ny Ubuntu ho an'ny hafa, heveriko fa nandany fotoana ...
Ho ahy manokana, akorandriaka sy firaisankina no ankafiziko, tsotra ny firaisan-kina, ny zava-mitranga dia mbola tsy manana "fahamatorana" akorandriaka na kde izy io, na dia hitako aza ny lantiro sy ny fomba handraisana ireo birao. mamokatra ary miaraka amin'ny compiz dia toa mahavariana, ny zavatra ratsy dia ny aretin'andoha hanamboarana azy, mavesatra sy miadana kokoa noho ny akorandriaka ary manome olana vitsivitsy amin'ny compiz.
Amin'ny ota, ny tena tiako indrindra dia ny fananana fahalalahana hanova sy hampiasa birao isan-karazany amin'ny Ubuntu! 🙂
Manitsy anao aho, G-Shell dia tsy tena matotra, mila mitombo izy io, saingy amin'ny làlana tsara kokoa noho ny Unity no tokony ekena.
Ny firaisankina dia tsy ratsy, ny zavatra dia araka ny voalaza teo aloha, Canonical dia tsy manome fanohanana ny serivisy an'ity birao ity amin'ny rafitra hafa satria fotsiny, toa tsy miraharaha izany. Indraindray ny Canonical dia mitondra tena toy ny Apple na Microsoft, fa tsy izany no antony tokony hanamelohana an'i Ubuntu, toy ny fanaon'ny Courage hatrany, satria misy ny distrosan'ny vondrom-piarahamonina Ubuntu, toy ny LinuxMint.
jamin-samuela dia hoy izy:
ufffffffffff ny rahalahiko correctisimooo !! +100
Io no lazaiko. Mandeha Ubuntu toy ny fizarana, miaraka amin'ny tahiry goavambe, tsy toy ny Unity ary ny hevitra ampihimamba sy mpikarama an'ady (izay tsy manakiana) Mark Shuttlworth. Azo ampiasaina izy io Ubuntu miaraka amin'ny tontolo birao sy voila hafa. Fantaro fa ny tanjon'ny Unity tsy izy irery io Desktop, fa mandeha lavitra kokoa: TV, Telefaona, Takelaka ..
Takatra ... azo lazaina ve fa ny fampiasana linux mint dia mampiasa ubuntu fa tsy misy firaisan-kina?
fa kosa .. linux mint dia mampiasa ny repository ubuntu be ??
Mazava ho azy fa mampiasa azy izy, ary manome azy io mikasika azy manokana. Izay no niavian'i Kanelina.
dia afaka milaza isika fa ny vahaolana kanto amin'ny ubuntu dia linux mint xD
Ny olona toa an'i Ubuntu ... ary maro no mitelina amin'ny Unity (tsy fahampian'ny fahalalana7). Tsy mitovy amin'ny fitiavana Unity io. Mety hisarika ny masonao ny vaovao amin'ny Linux…. fa… ho ahy… rehefa ela ny ela ny fivoarana dia mbola tsy voatanisa intsony izy io, misavoritaka kokoa ary voafintina ho faritra lehibe roa…. ary satria ilaina ny mametraka "patch" amin'ny rafitra mba hiasa ny fampidirana, sns, sns ... puufff.
Ny harenan'ny birao dia zava-bitan'i Linux ary ny fotoana mametraka ny olona rehetra amin'ny toerany - rahoviana no hihemotra ny Canonical?
Wolf dia hoy izy:
Ny hany miantso ahy avy ao amin'ny Unity dia ireo solomaso, zavatra izay azo antoka fa ho hitantsika indray andro any amin'ny KDE raha misy programa sahy. Satria inona ny fizarana ireo singa azo tanterahina ao amin'ny KDE (Icon-Tasks eto, Global Menu any ary dia izay), ary vao mainka aza raha ny lohahevitra plasma Elly no ampiasaina.
Mamaly an'i Wolf
firaisana ?? pfff ahahaha azafady! Aleoko ny kanelina .. tsy ho azoko mihitsy izay noeritreretin'ireo olona kanônika rehefa namorona izany izy ireo .. tsy azon'izy ireo natao ny nametraka io bar io raha dock nooo fa napetrany teo amin'ny ilany ankavia mba hahasosotra kokoa
Miala tsiny amin'ny hadisoako amin'ny tsipelina 😉
Nanohy i Aja, ny zavatra tsara dia efa tsapan'izy ireo ny loza nantsoin'izy ireo hoe firaisana ary ankehitriny dia fantany tsara izany.
Faly aho mahafantatra fa amin'ny andiany 12.04 dia azonao atao ny mametraka ny "gnome-panel" izay karazana gnome 2 na farafaharatsiny zavatra tena mitovy. Toy izao no tokony ho toy izao ny akorandriaka gnome3 ... toa mitovy amin'ny gnome 2 ... azoko antoka fa ny ankamaroan'izy ireo dia hametraka an'io fonosana io ... ary hanala ny firaisankina amin'ny sarintany amin'ny famoahana manaraka . ahaha
Toa hitako fa hitady carcamal ny RAE
Herim-po inona no dikan'ny RAE?
Royal Spanish Academy.
Nihevitra aho fa any amin'ny firenena miteny espaniola rehetra dia fantany izy, amin'ny ankamaroan'ny rakibolana sy ny sisa rehetra.
TDE dia hoy izy:
Ary any Venezoela dia manana ny fitsipi-pitenenan'i Andres Bello ...
Valio amin'i TDE
hahahaha ok ok izao raha azoko .. tsara aho miala tsiny indray noho ny hadisoako tamin'ny tsipelina, ny zava-dehibe dia hoe azon'izy ireo ny hafatro.
@ jamin-samuel no ratsy, "mahazo ny hafatra ianao" maro no tsy manisy ratsy an'io tsipelina io.
Hiverina amin'ny troll spelling ve isika? Fuck Courage, takatra tanteraka fa tokony hiteny sy hanoratra tsara ianao, tsy lavina izany, saingy misy ny olona, ​​na dia maharary aza, dia zatra manoratra ratsy, ary eto Venezoela dia areti-mandringana hoy aho aminao.
Raha ny tena izy, raha lazaina manokana, fa ny maha-mpandeha tsipelina, ry zaza malala, tsy mahazo mankaiza ianao, tsy manitsy na mampazava saika ny olona rehetra, ary amin'ny farany, ny ataonao dia manelingelina ny mpampiasa na ilay olona. ary noforonina ny lelafo malemy ... Milamina kely ary ahintsio izay tena tsikaritra.
Eny, tsy voatery nosokafanao tsara ny vavanao, omenao asa aho miaraka amin'ireo lahatsoratrao sy Hoyganismo.
Jereo ihany koa ny hoe iza no nilaza aloha fa voavela heloka amin'ny tsipelina.
Tsy ao Venezoelà ihany, fa eto koa dia fantatro ireo HOYGANS izay milaza zavatra amin'ny fomba Tuenti hoe:
Misaona aho, misy pari? lego boy mankamin'ny tranonkala iray
Izay ratsy lavitra noho izay hitantsika eto, ary mandoto azy ireo aho fa miteny amiko ho any amin'ny helo izy ireo hahahaha.
Hesorina amin'ny sarintany ve ny firaisankina? Raha vao namoaka ny kinova 5.8 ry zareo
Aleoko ny Unity (na dia tsy ny politika exclusiviste an'ny Canonical aza) toy izay an'i Cinammon. Mahita firy bebe kokoa amin'ny fampifanarahana amin'ireo sehatra marobe aho, mahita hatsarana tsara kokoa ihany koa aho, ary na dia maro aza no tsy tia azy, dia toa mahaliana ahy ny resaka Lens. Aleoko inefatra i Xfce, izay andramako ankehitriny ary resy lahatra ahy tanteraka izy io noho i Cinammon. Ny fankasitrahako manokana fotsiny izany.
Tena tsy mampino ve izany ny anao amin'ny kanelina.
Na izany na tsy izany, inona no ananan'i Kanelina ka tsy tianao na inona na inona mihitsy?
ALX dia hoy izy:
Padawan kely tsotra sy tsotra ... ny firaisankina dia natao ho an'ny efijery maoderina amin'ny endrika 16: 9, izay ahitanao sakany betsaka ... tsy fantatro ny momba anao fa ny dock firaisan-kina dia azo ampiharina sy mamaly, mihoatra ny maro ny hafa ao amin'ny linux, ny solomaso sy ny hud dia azo avy amin'ny firaisan-kina, avelany hanana fahaiza-mikaroka eo an-toerana ambony lavitra noho ny akorandriaka, tontolo iainana tsara izany na dia tsy tianao aza izany, ho an'ireo olona tia mihetsika haingana ary mbola tsy azoko hoe maninona izy ireo no manipy maloto be ...
Mikasika ny kanelina, tsy tiako ny hevitra na ny fampiharana ... amin'ny solosaina izay efa nosedraina ny vokany dia ratsy sy tsy ilaina ny milaza ny fanombohana ... toy ny kopian'ny kde ratsy ... (hevitra manokana)
Valiny amin'i ALX
Famaky dia hoy izy:
Eny, tiako ny firaisan-tsaina noho ny vatan'ny gnome ary mpihinana sakaiza foana aho. Toa tsy manelingelina ahy ilay dock, satria mandeha hatrany ankavanan'ny efijery izy io, satria eo ny bokotra fikandrana. Toa tsy miadana amiko izany, na dia misy tontolo mavesatra kokoa noho ny hafa aza, dia toy ny kde, ny hafainganam-pandeha dia mira lenta amin'ny fampidirana ireo fitaovana rehetra amin'izy samy izy. Mety tsy panacea io, fa ny gnome-shell dia notsikeraina mafy (ary mbola) notsikeraina mafy, sahala amin'ny nivoahan'ny kde4, tsy nisy toerana ahazoana azy. Ny zava-drehetra dia tsiro ary omeo fotoana halamina.
Ny zavatra iray hafa dia ny fanapahan-kevitr'i Canonical tsy hamolavola azy hafa ankoatry ny Ubuntu, fa tetikasan'izy ireo izany, ary voalohany tokony hiasa amin'ny distro azy ireo, avy eo ho hita izany
Valiny tamin'i Hache
mivadika ho xubuntu ny olona.
Tantara tena nitranga ...
Amin'izao fotoana izao amin'ny Ubuntu manaraka dia manao izay tsara indrindra vitany izy ireo (ary manambara izany amin'ny alalàn'ny fandokafana be) mba hanatsarana ny fomba GNOME Fallback izay hantsoin'izy ireo hoe Classic. Heveriko fa tsy ho an'ny fitiavan'ireo mpampiasa azy sy ny ho toetrany ... .. satria ho hitan'izy ireo ny sofin'ilay amboadia. Amin'izay tiako Ubuntu sy ahpra ... vao mainka tsara kokoa.
Tsy aleo ve miezaka mafy, na dia sarotra aza, ny mampiditra akorandriaka Gnome 3 amin'ny fomba mitovy? Amin'ny fotoana ahitan'izy ireo an'i Gnome 3 Shell ho mpifaninana henjana amin'ny ezak'izy ireo dia misy zavatra tsy mety amin'ilay fotokevitra.
tena marina .. raha nasiana akorandriaka gnome i ubuntu dia hahomby izany .. fa angamba namorona firaisan-kina izy ireo mba hanavahana kely kokoa an'i Fedora .. satria i Fedora dia mampiasa akorandriaka ..
miaraka am-poko ato am-poko .. Tiako kokoa raha toa ka manohana akorandriaka gnome ny Ubuntu fa tsy firaisan-kina.
Fantatr'izy ireo fa ny Unity dia tany Ubuntu izay Windows Vista ho an'ny Microsoft.
Ary izao fantatrao izao ... inona no hatolony antsika amin'ny ho avy? ahahaha tsara manantena aho fa zavatra mendrika izany
Misalasala be dia be aho, fa aleo izy ireo manintona toa azy ireo any amin'ireo namanay avy any Redmond.
Menu mifono sy afeno Menubar: Afeno ny bara menio ao amin'ny Thunderbird
LMDE Update Pack 4 sy ny safidy Gnome 2